Yintoni i-toxoplasmosis kwaye ichaphazela njani ukukhulelwa? Bezzia
I-Toxoplasmosis sisifo esosulelayo, esibangelwa yi-microscopic organism ebizwa ngokuthi "toxoplasma gondii" ngoko ke igama layo. Nabani na unokufumana olu sulelo, kodwa xa kufikwa umfazi okhulelweyo iingozi zinokubulala. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukukhusela usulelo ngokunqanda ukusetyenziswa kokutya okuthile okunokuba neprotozoan ebangela usulelo.
Oku kungenxa yokuba i-parasite ebangela usulelo inokuwela i-placenta kwaye yosule umntwana ongekazalwa, onokuthi ubangele usulelo lokuzala, oko kukuthi, ngaphambi kokuzalwa. Ukuba oku kwenzeka kwiiveki zokuqala zokukhulelwa, umntwana ongekazalwa unokujamelana neengxaki ezahlukeneyo ekuphuhlisweni kwayo, kunye nemiphumo emibi kakhulu. Apha sikuxelela yonke into ofuna ukuyazi ngayo i-toxoplasmosis kunye nendlela ekuchaphazela ngayo ukukhulelwa.
1 I-Toxoplasmosis ngexesha lokukhulelwa
1.1 Imingcipheko kumntwana ongekazalwa
1.2 Ukuthintela i-toxoplasmosis ekukhulelweni
I-Toxoplasmosis ngexesha lokukhulelwa
Durante ukukhulelwa Kuyimfuneko ukulandela izikhokelo ezithile kunye neengcebiso malunga nokutya kunye neminye imikhwa, kuba kukho imingcipheko eyahlukeneyo yophuhliso lomntwana. Enye yazo lusulelo lwe-toxoplasmosis, isifo esinokufunyanwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo.
Ngokusetyenziswa kwenyama kuncinci okanye akuphekwanga kakuhle kwaye iqulethe i-parasite.
Ngeentsalela ze-parasite enokuthi ibekhona kwilindle lekati.
Ngokusulela kwi ngaphaya kwe-placenta ukusuka kumama ukuya kwi-fetus.
Oko kukuthi, i-toxoplasmosis ayisasazeki ukusuka komnye umntu ukuya komnye, ngaphandle kwaxa ukhulelwe. Kwaye ngenxa yengxaki eyongeziweyo yokuba akukabikho isitofu sokugonya namhlanje, kubalulekile ukunqanda ukosuleleka ngexesha lokukhulelwa. Ngale ndlela, imingcipheko ebalulekileyo iyaphetshwa ekuphuhliseni umntwana ongekazalwa. Ngokukodwa kwiiveki zokuqala zokukhulelwa, apho umngcipheko we-fetus ukhulu ngakumbi.
Imingcipheko kumntwana ongekazalwa
I-Toxoplasmosis ingaba yingozi ngakumbi okanye ingaphantsi kwi-fetus, ngakumbi kwiiveki zokuqala okanye ukuya kwi-trimester yesithathu. Phakathi kwezinto ezinokwenzeka iziphumo ezinokuthi zenzeke xa usulelo kuba toxoplasmosis ezi zilandelayo.
Ubunzima bokuzala obuphantsi, eyaziwa ngokwezonyango njengokuncipha kokukhula.
Iingxaki zombono, kuquka ubumfama.
umngcipheko wokuphuphuma kwesisungakumbi kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa.
I-Toxoplasmosis nayo inokuba nayo kuchaphazela uphuhliso lwenkqubo ye-nervous centralingqondo, ukuva, isibindi, udakada, inkqubo ye-lymphatic kunye nemiphunga.
Iimpawu zinokuhluka kakhulu kwimeko nganye, into eyenzekayo rhoqo kukulibaziseka kokuxilongwa xa umntwana ezelwe. Ngokubanzi Abaxatyiswanga ngeliso lenyama kwaye bayavela njengoko kukho ukulibaziseka okanye ukuphazamiseka ekukhuleni komntwana. Indlela yodwa yokubona ukusuleleka kwi-toxoplasmosis ngexesha lokukhulelwa yi-amniocentesis, uvavanyo lwe-intrauterine olwenziwa xa kukho imiqondiso yoku kunye nezinye iingxaki.
Ukuthintela i-toxoplasmosis ekukhulelweni
Ukungakhuseleki kunye novakalelo kwi-toxoplasmosis kunokubonwa kwiimvavanyo zeklinikhi eziqhutywe ekuqaleni kokukhulelwa, ayikuthinteli ukuba ifumaneke ngexesha lokukhulelwa. Ukunqanda oku, kufuneka ulandele ingcebiso yombelekisi wakho, eya kuba yile ilandelayo ngokubanzi.
Musa ukuyitya inyama engaphekwanga ngokupheleleyo kunye/okanye ngaphambili umkhenkce onzulu.
Kuphephe ukutya okutyiwa kukrwada, njengeesoseji okanye i-carpaccio.
thatha kuphela ubisi kunye nezinto eziphuma kwi-pasteurized. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukuthatha i-meringue okanye iimveliso ezineqanda elikrwada.
Ukuba unekati, kufuneka nje kuphephe ukudibana nelindle kulapho kufumaneka khona iintsalela zesimfimfithi ukuba isilwanyana siye satya ezinye izilwanyana ezikrwada kwaye sosuleleka.
Oku akuthethi ukuba kufuneka uhambe kwikati yakho, vele uyeke ukucoca ibhokisi yenkunkuma yekati kwaye uvumele abanye abantu ukuba bayenze. Kwaye ukuba uza kutya ngaphandle, qiniseka ukuba ukhetha iimveliso eziphekwe kakuhle, kuphephe imifuno ekrwada kwimeko yokuba abacocekanga kakhulu kwaye okona kubaluleke kakhulu, ujabulele ukukhulelwa kwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ukukhulelwa » Yintoni i-toxoplasmosis kwaye ichaphazela njani ukukhulelwa?
Amaqhinga okwenza mhlophe amakhonkco ethayile